နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်….
Posted by မောင် ပေ on May 7, 2012 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 24 comments
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်လောက်ကပေါ့… အဲဒီ တစ်ပတ်ကျော်ရဲ့ တစ်နေ့ သ၌ တုန်းကပေါ့ဗျာ…( တစ်နေ့ ကတော့ တစ်နေ့ ဘဲဗျ ၊ သ၌ ဆိုတာကတော့ ဘာကြီးမှန်း ကျုပ်လဲ မသိပါဘူး ) မောင်ပေ ဆိုတဲ့ ကျုပ် ဟာ ဝယ်နေကြ ကွမ်းယာဆိုင်လေးမှာ ကွမ်းယာမှာရင်း ၊ အဲဒီဆိုင်က ဝယ်ထားတဲ့ အဲဒီအပတ်ထွက် ဂျာနယ်တစ်စောင် ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာပါတာကတော့ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ၊ အပြောင်းအလဲ ဘာညာ အိုဗျာ..စုံစေ့နေတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့မှာ ဘွဲ့ ရပြီး အလုပ်မရလို့ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ကိုလဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျ ။ ကျုပ်အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရင်း အတွေးပွားနေတုန်း ၊ ကွမ်းယာသည် က ကျုပ် ကို ကွမ်းယာလာပေးရင်း..
“ အဲဒါ လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဲ ကိုပေရေ ”
“ ဘယ်သဟာကို ပြောတာလဲဗျ ”
“ ကိုပေ ဖတ်နေတဲ့ဟာလေ ၊ ဘွဲ့ ရ အလုပ်မရှိ ၊ ဘွဲ့ ရလို့ အလုပ်ရမယ် မထင်နဲ့ ဆိုတာ ၊ အလုပ်ရဖို့ ဘွဲ့ ယူတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ”
“ ဒါကတော့ အမှန်ဘဲလေ ၊ ခလေးတွေ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရဖို့ ဘွဲ့ ယူတာမှ မဟုတ်တာ ၊ မိဘတွေအတွက်သာ ငါ့သားသမီး ဘွဲ့ ရရင် အလုပ်ကောင်းကောင်း တစ်ခုတော့ ရမှာဘဲ လို့ တချို့ က တွက်ကြတာမလား ”
“ တစ်ခြား မကြည့်နဲ့ လေ ၊ ကျုပ် သားအကြီးဆုံးကောင် ကို ဘဲ ကြည့် ၊ အဲ့ကောင် ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ ရတဲ့ အထိ ကျုပ် ကွမ်းရောင်းပြီး ထားပေးခဲ့တာ ၊ အခု ဘွဲ့ လဲရပြီ ဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြောတော့ ၊ သူကဘွဲ့ ရပညာတတ်မို့ လား ၊ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကြမ်းမျိုး ကြတော့ မလုပ်ချင် ၊ သူလုပ်ချင်တဲ့ အေးအေးလူလူ နဲ့ လခကောင်းတဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုတာလဲ ၊ ထမင်းထုပ်သိုးအောင် လိုက်ရှာတောင် ရှား ၊ ရပြန်တဲ့ အေးအေးလူလူမျိုးကြပြန်တော့လဲ လခ က မဖြစ်စလောက် … ဟူး.. အဖေ့လို ကွမ်းယာရောင်းပါလား ဆိုတော့လဲ ၊ ရှက်တယ် တဲ့ဗျာ ”
“ အဲဒါ ခင်ဗျား မှားခဲ့လို့ ဗျ ၊ သည်ကောင် ကျောင်းတက်ကတဲက ၊ ဆိုင်မှာ ကူလုပ်ခိုင်းခဲ့ရင် ၊ ကွမ်းရောင်းတာနဲ့ အကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး ၊ လုပ်ဖြစ်ရင် လုပ်ဖြစ်ဦးမှာ ”
“ အေးဗျာ..အရင်တုန်းက သူက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဆိုတော့လဲ ၊ အေးအေးလူလူကျောင်းစာသာလုပ်ပါစေ ဆိုပြီး ကျုပ်ကလဲ လွှတ်ထားခဲ့တာကိုး ၊ သူ ကွမ်းမရောင်းလဲ ကိတ်စတော့ မရှိပါဘူး ၊ ဒါပေသည့် သူ့ ဘဝအတွက် သူ့ နောင်ရေးအတွက် က အလုပ်တစ်ခုရှိမှဖြစ်မှာလေ ၊ အဲဒါ ကိုပေ့မှာ တွေ့ ထားတာလေး ရှိရင်လဲ ပြောပေးပါဦးဗျာ ”
“ ကောင်းပြီလေ.. ကျုပ် လဲ စုံစမ်းပေးပါမယ် ၊ တစ်ခုခုတွေ့ ရင် ချိတ်ခဲ့လိုက်မယ်ဗျာ ”
ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲ ကွမ်းယာထုပ်ယူပြီး ၊ ကျုပ် ရဲ့ ကျောက်သူဌေးဆီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျုပ်အလုပ်က သူဌေးရဲ့ လူယုံပေါ့။ သူက ဟိုဟာလေးသွားလုပ်စမ်း ဆို သွားပေးရ ၊ ဒီဟာလေးဝယ်ပေးဆို ဝယ်ပေးရ နဲ့ သူခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးရတာပေါ့ဗျာ။ အလုပ်ကသာ အကုန်လုပ်ရတာ ရာထူးနာမည်ကြ ကောင်းသား၊ ဘောစိရဲ့ လူယုံ တဲ့ ။ လခကတော့ စားသောက်ရုံ ထပ်ပိုရပါတယ် ။ သူဌေးဖြစ်လောက်တဲ့အထိတော့ မရပေမယ့် ၊ ကျုပ်သူဌေး အရောင်းအဝယ်တစ်ခုဖြစ်ရင် အမြတ်ထဲကနေ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သပ်သပ်ခွဲပေးသေးတာဆိုတော့ လုပ်ပျော်တာပေါ့ဗျာ။ အခုလည်း သူဌေး ဆီ ရောက်တော့ ၊ သူဌေးက သူ့ ကား ကို အင်ဂျင်ဝိုင်လဲ ၊ ရေဆေးပေါလစ်တိုက် သွားလုပ်ခိုင်းတာနဲ့ ၊ သူဌေးကား ကို ခပ်မိန့် မိန့် ကြီးမောင်းပြီးထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ မြို့ က အရင်တုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယမြို့ တဲ့ ၊ အခုတော့ ဘယ်အဆင့်လဲ မသိတော့ပါဘူး။ မြို့ ကြီးဖြစ်တာနဲ့ အညီ လူတော်တော်ရှုပ်ပြီး အင်မတန်စည်ကားတဲ့မြို့ ကြီးဗျ ။ လမ်းတိုင်းမှာ သွားလာနေတဲ့ ကားဆိုင်ကယ်စက်ဘီးတွေနဲ့ အပြည့်.. အဲ..မြို့ ကြီးဆိုပေမယ့် ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း နဲ့ ပတ်သက်ရင် တော်တော်မလိုက်နာတဲ့ ၊ ဗရမ်းဗတာမြို့ လို့ ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ( ကျုပ် ကိုယ်တိုင်တောင် ဆိုင်ကယ်မောင်းရင် ဘယ်တော့မှ ဦးထုပ်မဆောင်းဘူးရယ် ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ ရှိတဲ့လမ်းကိုတော့ ရှောင်မောင်းရတာပ ) ကျုပ်သွားတဲ့ ရေဆေးဆီလိုက်က လမ်းမကြီးတစ်ခုရဲ့ ဘေးမှာ။ အဲဒီလမ်းမကလဲ ဘုရားစူးလမ်းမ ၊ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လမ်းက ဟိုဘက် ဒီဘက် ကားတစ်စီးစာလောက်ဘဲ သွားလို့ ရတယ် ။ ရေဆေးဆီလိုက်ကိုရောက်တော့ ဝင်လို့ မရဘူး။ ရေဆေးဆီလိုက်ကိုလာတဲ့ကားတွေရယ် ၊ အဲ့နားက အိမ်က ကားတွေရယ်နဲ့ ၊ အားလုံးက ရပ်ချင်သလို ရပ်ထားကြတာဆိုတော့ ၊ ရေဆေးဆီလိုက်ထဲကို ဝင်မရဘူး။ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းက ဆေးအဖြူအနီကျားတွေနဲ့ မရပ်ရ တဲ့ ဟာဆိုပေမယ့်လဲ ၊ ရပ်ချင်သလို ရပ်ထားကြတာပါဘဲ ။ ဒါနဲ့ ..ရေဆေးဆီလိုက်က လူကို ဘယ်အချိန်လောက် ရှင်းမလဲ ဆိုတော့ ၊ နောက်နာရီဝက်လောက်ဆိုရင် ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ၊ အဲ့ခါကြမှ ပြန်လာခဲ့မယ်ပြောပြီး ၊ ကျုပ်ဖုန်းအတွက် ငွေဖြည့်ကဒ်ဝယ်ဖို့ ၊ ဖုန်းဆိုင် ကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။ ဖုန်းဆိုင်ရှေ့ ကိုရောက်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ၊ ပလက်ဖောင်းက မျဉ်းအဖြူအနီ ၊ မရပ်ရတဲ့ သင်္ကေတ၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ရှေ့ မှာ ကားရှင်းနေတာရယ် ၊ ခဏဘဲရပ်မှာရယ်နဲ့ ၊ ကားထိုးလိုက်ပြီး ဆိုင်ထဲကို ဖုန်း ငွေဖြည့်ကဒ်ဝင်ဝယ်လိုက်တယ် ။ အဲ… ဆိုင်ထဲကလဲ အထွက် ကားဆီသွားမယ်လဲ လုပ်ရော ၊ မော်တော်ပီကယ် ခေါ် ယာဉ်ထိန်းရဲ ပါဗျား ၊ ကားဘေးမှာ ကားကို လက်ထောက်ရပ်နေရင်းနဲ့ ၊ ကျုပ် ကို စောင့်နေတဲ့ ပုံပါဘဲ။ ဒါနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ 
“ ဟဲဟဲ.. အစ်ကိုကြီး ဘာကိတ်စ ရှိလို့ လဲ ”
“ ဒါ.. အစ်ကို့ ကားလား ”
“ ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဘာလို့ လဲ ဟင် ”
“ အစ်ကို့ ကားက ဒီ ယာဉ်ရပ်နားလို့ မရတဲ့နေရာ (အဖြူအနီတုံးဘေး) မှာ ရပ်ထားလို့ ၊ အဲဒါ ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ် ခင်ဗျ ”
“ ဗျာ… ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ် ဟုတ်လား ၊ ကျွန်တော် ခဏလေးဘဲ ရပ်တာလေဗျာ ၊ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရာ ”
“ စည်းကမ်းက စည်းကမ်းပါဘဲဗျာ ၊ ကဲ အစ်ကို့ လိုင်စင်လေးပေးပါ ”
ကျုပ်လဲ စိတ်ညစ်ချွေးတွေထွက်လာပြီး ၊ သူ့ ကို ငိုပြလိုက်ပါတော့တယ် ၊ သူဌေး က ခိုင်းလိုက်လို့ ၊ သူဌေးကား ကို ဆီလဲ ၊ ရေဆေး ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျုပ် လခ ဟာ မဖြစ်စလောက်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒဏ်ငွေရယ်လို့ အတိအကျကြီးဆောင်ခိုင်းမယ့်အစား ၊ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်လေး လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ကူညီပေးစေလိုကြောင်း ၁၀မိနစ်လောက် သူ့ ကို ညည်းပြလိုက်တော့ ၊ သုံးထောင်ကျပ် နဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ် ၊ ကျုပ်လဲ သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်စကား အထပ်ထပ်ပြောရင်း ၊ နောက်ကိုတွေ့ ရင်လဲ ကူညီပါဦးလို့ ပြောခဲ့ပြီး ရေဆေးဆီလိုက် ကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။ ကားရေဆေးပြီးတော့ သူဌေးဆီ ကို ကားပြန်သွားပေးရင်း ၊ သူဌေး ကို ပိုပိုသာသာလေး တစ်သောင်းခွဲ ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ပြန်ညည်းပြလိုက်တော့ သူဌေးက ငွေပြန်ပေးရှာပါတယ်။ (ဒါကတော့ ဆေးဖိုးဝါးခ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့နော)
ကျုပ်လဲသူဌေးဆီက ပြန်ခဲ့တော့ ၊ အစက ကျုပ်နဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့ ၊ ကွမ်းယာသည်ရဲ့ သား အတွက် အိုင်ဒီယာရသွားတယ် ။ ဒါနဲ့ ကွမ်းယာဆိုင် ကို ပြန်သွားပြီး ၊ ကွမ်းယာသည် နဲ့ စကားထိုင်ပြောဖြစ်ကြတယ် ။ သူ့ သား ကို ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ ထဲ မှာ အလုပ်ရအောင် လျှောက်ဖို့ ၊ လခ ဘယ်လောက်ရသည်ဖြစ်စေ ၊ အလုပ် ရအောင် လျှောက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ ကွမ်းယာသည် က ဘာအကျိုးတွေရှိမလဲပြန်မေးတော့ ၊ ကျုပ် ကြုံလာခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြလိုက်တယ်။
“ ဒီအလုပ်ဟာ ကုသိုလ်လဲရ ဝမ်းလဲဝ ဆိုတဲ့ စကားလို့ ပြောလို့ မရပေမယ့် ၊ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အဲ့နီးပါး သွားတဲ့ အလုပ်ဗျ ”
“ အဲဒါဘာသဘောလဲ ကိုပေရဲ့ ၊ လုပ်ပါဦး ”
“ အခုအခါ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဝန်ထမ်းဌာနတွေ ဟာ ကိုယ့်ဌာနအတွက် ဘက်ဂျက် ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာရတော့မယ် လို့ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဖတ်ရကြောင်း ၊ ကလင်းဂါးဗားမန့် ဖြစ်ဖို့ အတွက် အခွန်အခ တွေကို အတိအကျ ကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ အဖြစ် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း ဖာက်တဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ ယာဉ်တွေကို လိုက်အရေးယူ ဒဏ်ငွေကောက်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ တိုးလာစေမယ့်အကြောင်း ၊ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ၊ အခုအခါ စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူက များလွန်းတဲ့အတွက် ၊ ကျုပ်ကြုံခဲ့ရသလိုမျိုး…ယာဉ်မရပ်ရတဲ့နေရာမှာ ရပ်တဲ့ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ကို လိုက်ဖမ်းရုံနဲ့ တင် တစ်ရက်တစ်ရက် အမှုပေါင်း မနဲရမှာဖြစ်ကြောင်း ၊ တစ်ရက် ကို အမှု၂၀ ရအောင်လိုက်ရှာပြီး ၊ ၁၀မှုကို နိုင်ငံတော်အတွက် တရားဝင် ရှိုးပြပြီး ၊ ၁၀မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ ကို အိတ်ထဲကောက်ထည့်လို့ ရကြောင်း ၊ ထိုသို့ လုပ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်လဲ အာလကေရ ၊ ကိုယ်လဲ အာလကေ ရ ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ၊ နောက်ပြီး အမှုများများဖမ်းနိုင်တဲ့ အတွက် ရာထူးတိုးမယ့် လမ်းကြောင်းလဲ နှေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း … ” ရှင်းပြလိုက်တယ်။ စကားအဆုံးမှာ ကွမ်းယာသည်လဲ ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားပြီး..
“ ဟာ… ဟုတ်တယ်နော..ကိုပေ ပြောတာ အကောင်းဆုံးဘဲ ၊ ကျုပ်ဘာလို့ ဒီလို မစဉ်းစားမိမှန်းမသိဘူး ၊ ကျုပ်ကောင်ကို မနက်ဖန်ကစပြီး ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ ထဲ သွားဝင်ခိုင်းလိုက်တော့မယ် ၊ ဒီကောင် က ဘွဲ့ ရပြီးသား ဆိုတော့ ၊ ရမှာပါနော ”
“ ရရမှာပေါ့ဗျာ ။ ဘာလို့ မရရမှာလဲ ၊ အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ဆိုရင် စစ်တပ်တို့ ၊ ရဲစခန်း တို့ မှာ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ရန် သင့်အားအလိုရှိသည် ဆိုလား ဆိုင်းဘုတ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်လေ ၊ အခု ကိတ်စက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေ ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ၊ နိုင်ငံတော် အတွက် ဝင်ငွေ/ဘဏ္ဍာငွေ တိုးပွားဖို့ ၊ ကိုယ့်အတွက် မြိုးမြိုးမြက်မြက် အာလကေ ရဖို့ ၊ ဆိုတော့ဗျာ ၊ ဟို တီဗီကြေငြာထဲကလို ၊ ဘာလိုသေးလဲ ဥကြီးရာ ပေါ့ဗျာ.. ဟားဟားဟား ”
“ ဦးကြီးရာတော့ လုပ်ပါ ကိုပေရယ် ”
“ အော်…နောက်ပိုင်း စားပါများတော့ သိလာရမှာပေါ့ဗျာ ၊ ကြည့်နေပါ ဟားဟား… ကဲကဲ ကျုပ်လဲ ပြန်လိုက်ဦးမယ် ၊ ခင်ဗျားသား ကိုသာ မနက်ဖန်ကြ လှုပ်ရှားခိုင်းလိုက်တော့ ”
“ ဟုတ်ကဲ့..မနက်ဖန်က စပြီး သေချာသွားဝင်ခိုင်းလိုက်ပါမယ် ၊ ကိုပေ့ကျေးဇူးကိုလဲ မမေ့ပါဘူး ”
“ ကျုပ်ကျေးဇူးမမေ့ဘူးဆိုရင် ၊ လမ်းမှာတွေ့ တဲ့အခါ မဖမ်းဖို့ ၊ မရစ်ဖို့ တော့ ပြောပေးဗျာ ”
“ ဟားဟား.. ဟုတ်ပါပြီ ”
အဲဒါနဲ့ .. ကျုပ်လဲ အသိတစ်ယောက်အား ကြုံတွေ့ ရသော ဖြစ်ပုံလေးမှ အိုင်ဒီယာထုတ်ကာ ကူညီနိုင်ခဲ့လေသတည်း ။ ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့… အလုပ်အကိုင်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်လို့ ၊ သေချာလေးသာ ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ.. နော… လောကကြီးဟာ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ရင် နေပျော်စရာဘဲ မလား ။ ကဲကဲ..တော်သေးဘီဗျာ ၊ ကျုပ် ရဲ့ အရေမရ ရေးထားတဲ့ “ ကွမ်းပို့ စ် ” ကို ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ၊ ကျုပ်မောင်ပေ က စာဖတ်သူအား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော ။
ကိုပေ့ ကွမ်းပို့ စ် က မိုက်တယ်ဗျို့။
ခေါင်က တကယ်ဘဲ လုံလာခဲ့ရင် ????
ဒီတော့ ခေါင်လုံ မလုံ အရင် စောင့်ကြည့်ပါရစေဦး ရှင်။
အခုတော့ ထွေးပစ် ရမှာ နှမြောစရာကြီး မို့ မျိုဘဲ ချလိုက်ပြီ။ :D
ဖတ်ပြီး သေချာ ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ခဗျာ။ ဒါနဲ့ အရီးလတ်ဆိုတာ male or female အခုထိ မသိပါကြောင်း။
ကိုပေ ရေ ကျွန်တော်လဲ အရီးလတ်ကို လူချင်းမတွေ့ဘူးပေမဲ့ ဒါ့ပုံထဲတော့ မြင်ဘူးတယ်ဗျို့
အသက်က မေသန်းနုလောက်၊ ချောတာက ၀တ်မှုန်လေးလိုလို၊ ခန့်တာက ခင်သန်းနု နုစဉ်ကအတိုင်း လောက်ဆို မျက်စေ့ထဲ မြင်မလားပဲ
သတင်းတွေ မှာ ဖတ်ရတာ တရုတ်က အ၀ယ်နဲလို့ ကျောက် အရောင်းအ၀ယ် အေးဆိုပဲ ၊ ကိုပေကြီး ရော ?
ကပေ့ အိုင်ဒီယာတွေတော့ လေးစားသွားပြီ ၊ လူ ချင်းတွေ့ မှ ဘာ ဆက်လုပ်ရင် ကောင်းမလဲ အကြံတောင်းရဦးမယ်
ဒီလောက် ဗယုတ်ကျပြနေတာကို ဘိုနိုက အနော့် ကို ယုံပမလားဗျာ…. windtalker ဆိုတာ ဗမာလို တိုက်ရိုက် ယူထားတာဗျ
အိပ်ချင်နေသော မျက်လုံးများ ပြူးသွား၏။
ညောင်းနေသော ဇက်များ ပြေ သွား၏။
အဟိ ဟိ ဟိ :D
သူတို့ ကိုနို့ ကို ပြတာ အရီးပုံ အစစ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ငင်င်င်င်င်င်င်င်။ ;-)
ကိုနိုလေး ရဲ့ မှတ်ချက် ကို “Best Comment” ပေးလိုက်ပါကွယ်။
နောက်တစ်ခေါက် ကျောက်ကောင်းကောင်း တစ်လုံး သယ်လာပေးပါ့မယ်။
တွေးစရာတွေ တပုံကြီးရလိုက်ပါတယ် …။
ဘွဲ့ရတော့ အလုပ်ရွေး မီးမြင့်သွားတဲ့ကလေးရယ်…
နေရာတကာ စည်းကမ်းမဲ့နေတဲ့ နေပြည်တော်ဟောင်းရယ်…
သူများနဲ့ အေးအတူပူအမျှ လိုက်စည်းကမ်းမဲ့ရတဲ့ ကိုပေရယ်…
တာဝန်ကျေပြီး ကျေတာဝင် တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲရယ်…
ကပေယယ် နင်ဂ ဘဲဥတလုံးဖြစ်ဖို့ အဲလောက်လွယ်ဒယ် ထင်လို့လား.. ရဲသင်ဒန်းမှာ အမှတ်အကောင်းဇုံးနဲ့ အောင်သူဒွေ၊ လူဂျီးအကက်ရှိသူဒွေသာ အက်စ်ဘီ၊ ယဉ်ထိန်းရဲ ဖြစ်တာ၊ သူနောက်ကမှ စခန်းရဲ.. ကျန်လုဒွေဂဒေါ့ သွားပေါ့ကွာ လုံထိန်းတပ်ရင်းထဲဂို။ ရဲတပ်သားဆိုလို့ အထင်မသေးနဲ့နော် အားလုံးလိုလိုဂ ဆယ်တန်းအောင် ဘွဲ့ယဒွေ…။
ဥကြောင် တို့ သဂျီး ဒို့ကြ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မှာဒုံး … ပြောဦးဗျ
( ကျုပ် ကိုယ်တိုင်တောင် ဆိုင်ကယ်မောင်းရင် ဘယ်တော့မှ ဦးထုပ်မဆောင်းဘူးရယ် ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ ရှိတဲ့လမ်းကိုတော့ ရှောင်မောင်းရတာပ )
ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်ဘို့အင်မတန်လွယ်တာ ကိုပေပိုသိပါတယ်လေ..
ကျောက်ခဲသေးသေးနင်းမိလဲ မှောက်နိုင်တာကလား…ဦးထုပ်တောင် အလှမဟုတ်
ကိုမိုက်ရဲ့ စေတနာ နဲ့တိုက်တွန်း အကြံပေးတာ ကို လေးစားကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
အကို သမဒဖြစ်ရင် ညီလေးကို အာကြံပေးအာရာရှိ ခန့် မယ်နော်
အဲ့ခါကြ ဘီမအီးရတော့ဝူးနော်။ သေချာ စဉ်းစားပါဦးဗျ
အမလေးကပေရဲ့ ကျောက်သမားပီသ သကို
ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ဥာဏ်စိမ်း ဥာဏ်ဝါတွေ
အူးလေးပြောသလိုဆို ကျောက်သမားတွေက ဥာဏ်ရောင်စုံရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ
စဉ်းစားရတဲ့ အလုပ်က အခက်ဆုံးတဲ့ဗျ ..
ဒါကြောင့် အဲ့အလုပ်ကို ဘူမှ လုပ်ချင်ကြဘူးတဲ့ ..
အဲ့လို နိုင်ဂံချားက သဋ္ဌိန်းဂျီး တစ်ယောက်က ပြောတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ ..
အခုတလောဝမ်းတထွာတွေတော်တောကြားနေရပါလား။ ဆူးကိုမေးသလိုမေးလိုက်အုံးမယ်။ ကိုပေ ၀မ်းတတောင် ဆိုရင်ကော ????????????
နာနဲ့ အတူသောက်နေတဲ့ ကမ်းကြီးကိုကြည့်ပါလား..မှောက်သွားတာ.
ဦးထုပ်မဆောင်းတဲ့ နင့်ခေါင်းကြီးလည်း ကြပ်ကြပ်သတိထား ။
ဟန်ချက်ပျက်လို့ကတော့ ခွပ်ခနဲ ပဲ
အော် ပု က ပေ့အတွက် စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့ ။ စိတ်ချပါ ပုရယ် ။ ပေ ဂလုစိုက်ပါမယ် ။ ဟီဟိ
အရေ လည်းရ အဖတ်လည်းရတဲ့ အပြင်..စဉ်းစားတွေးခေါ် စရာလေးတွေပါ.ရတဲ့ ပို့ စ်ပါ..ဗျာ။ တကယ်ပါ။
အလင်းကြီးရေ…. ပတ်ဝန်းကျင်က မြင်ကွင်းလေးတွေ ရယ်ပါ
ဒီလူကတော့ မန်လေး ဖူကူယားမားလား
မန်းတလေးမှာ စူပါနေချာရယ်တွေကြည့်ပြီး ဘူနေတဲ့ သူပါ မာဘယ်ဆိုး ရယ်